GNU / Linux ဖြန့်ဝေရေးသိုလှောင်ခန်းများ - သူတို့ပေါင်းစည်းခြင်း၏အနုပညာ! | Linux မှ
GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု၏ Repositories ၏ညီမျှစာရင်း
Repository ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဆာဗာ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော Linux Operating Systems အတွက်သီးခြားအစီအစဉ်များကိုလက်ခံသည်နှင့်အများအားဖြင့် Web Browser မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုများပါရှိသော်လည်း console သို့မဟုတ် graphical package manager မှတဆင့်ဝင်ရောက်ရန်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Repositories ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Linux အတွက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း repositories တွင်တွေ့ရသောပရိုဂရမ်များမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြသည် အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်းကိုဖန်တီးပြီးထောက်ပံ့ပေးသောသက်ဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးမှုများကနိူင်ငံရေးပြproblemsနာများကိုအသုံးပြုရန်အာမခံသည်။
1 Repositories ၏အသုံးပြုမှုကိုမိတ်ဆက်
2 တစ် ဦး Repository ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
2.2 ပရိုတိုကော -
3 Repositories အကြားသဟဇာတ
Distro တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် repositories ကိုအသုံးပြုကြသော်လည်း၎င်းတို့ထဲတွင်များစွာသော Distros အကြားအသုံးပြုနိုင်သောတူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူပရိုဂရမ်များ (packages များ) ပါ ၀ င်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ဆိုင်ရာ Operating Systems ၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပြင်ပသိုလှောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ဒီထုတ်ဝေမှုမှာအဲဒီရည်မှန်းချက်ကိုသဲလွန်စပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။Repositories ဘယ်လိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလည်ရမယ် မည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ကိုကြည့်။ ၎င်းတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်။
Ubuntu 18.04 Software နှင့် Updates Application Window
တစ် ဦး Repository ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ Standard Repository တွင်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။
DEBIAN Jessie (၈) အတွက် repository line ။
ပုံမှန် sources.list ဖိုင်၏ကြီးမားသောဥပမာတစ်ခုဆိုလိုသည်မှာ Distro မှရယူသုံးစွဲနိုင်သော Repositories ၏ ၀ င်ရောက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလိုင်းများသိမ်းဆည်းရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် configuration file တစ်ခုဖြစ်သည်။ DEBIAN Jessie တွင် (8) အောက်ပါတို့ဖြစ်လိမ့်မည်
Mint 18.2 « Software Origin »လျှောက်လွှာ ၀ င်းဒိုး
deb Repositories တွင်ပြုစုထားသော package များသာဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ installation package များ (binaries) သာရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်
deb-src- Repositories တွင်ရရှိနိုင်သည့်စုစည်းထားသော package များ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်များသာဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ source packages များဖြစ်သည်။
http:// - ဝဘ်ဆာဗာတွင်ရရှိနိုင်သည့်မူရင်းကိုညွှန်ပြရန်
ftp: // - FTP ဆာဗာတစ်ခုမှရရှိနိုင်သောမူရင်းအတွက်
CD ROM: // - CD-ROM / DVD-ROM / Blue-Ray မှတပ်ဆင်ရန်
ဖိုင်: // - system file အဆင့်ဆင့်တွင်ထည့်သွင်းထားသော local origin တစ်ခုကိုညွှန်ပြရန်
ftp.xx.debian.org ==> xx သည်ဆာဗာ၏မူလနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသည်
ဆာဗာအမည် ==> DEBIAN ပါသောအခြားအရာများဖြစ်နိုင်သည်။
ဒေဗန်နီ DEBIAN အခြေပြုလည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
distro_name: ၎င်းတွင်ပါသောအခြား distro သို့မဟုတ်အထူးအမျိုးအစားများကိုညွှန်ပြရန်ဆာဗာတွင်ရနိုင်သည်။
ဗလာ: အကြိမ်ပေါင်းများစွာဤအနေအထားတွင်ဘာမျှမရှိပါကတည်ရှိနေသမျှအရာအားလုံးသည်အထူး Distro တစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
DEBIAN Repositories များကိုဗားရှင်းများအဖြစ်ခွဲထားသည်။
OldStable (တည်ငြိမ်သော Old): DEBIAN ၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအဟောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော package များကိုသိမ်းဆည်းထားသော version ။ လောလောဆယ်၎င်းသည် Jessie ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
တည်ငြိမ်သော: လက်ရှိတည်ငြိမ်သော DEBIAN ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော package များကိုသိမ်းဆည်းထားသောမူကွဲ။ လောလောဆယ်ဒီ Stretch ဗားရှင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။
စမ်းသပ်ခြင်း အနာဂတ် DEBIAN ၏ Stable Version နှင့်သက်ဆိုင်သော Package များကိုသိမ်းဆည်းထားသော Version ။ လောလောဆယ်၎င်းသည် Buster ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
မတည်ငြိမ်သော: DEBIAN ၏စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာဗားရှင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုများအောက်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသောအနာဂတ်အစုအဝေးနှင့်သက်ဆိုင်သော package များကိုသိုလှောင်ထားသည့်ဗားရှင်း။ ၎င်းသည် SID ဗားရှင်းကိုအမြဲပိုင်ဆိုင်သည်။
မှတ်စု: ဗားရှင်း၏အမည်ကိုများသောအားဖြင့် "-updates" သို့မဟုတ် "-proposed-updates" ၏ရှေ့ဆက်နှင့်ပါ ၀ င်သည် ထိုဗားရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဖော်ပြထားသော packages များသည်ထိုဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်ချက်ချင်းသာလွန်သောဗားရှင်းမှမကြာသေးမီကလာခဲ့သောကြောင့်၊ ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်လေ့ရှိသည်။ Security Repository နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအချိန်များတွင်၊ ရှေ့ဆက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် "/ updates" ဖြစ်သည်။
DEBIAN တွင် Repositories များတွင်ဌာနခွဲသုံးခုရှိသည်။
အဓိက: DEBIAN အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လမ်းညွှန်ချက်များအရအခမဲ့ DEBIAN ဖြန့်ချီမှုတွင်ပါ ၀ င်သော package များအားလုံးသိုလှောင်ထားသည့်ဌာနခွဲ။ DEBIAN ကိုတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းသည်ဤဌာနခွဲနှင့်လုံးဝဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပံ့ပိုးမှုများကို ဖန်တီးသူများကသူတို့ကိုအခမဲ့လိုင်စင်ပေးပြီးသော packets များကိုသိုလှောင်ထားသည့်ဌာနခွဲသည်၎င်းတို့တွင်မူပိုင်ခွင့်မရှိသောပရိုဂရမ်များမရှိဘဲအလုပ်မလုပ်နိုင်သော open source ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား element တွေကိုအခမဲ့မဟုတ်သောအပိုင်းကနေဆော့ဖျဝဲသို့မဟုတ်ဂိမ်း ROM များ, consoles စများအတွက် BIOS, အဖြစ်စီးပွားဖြစ်ဖိုင်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့မဟုတ်သော ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုပြန်လည်ကန့်သတ်သောပြင်းထန်သောလိုင်စင်အခြေအနေအချို့ရှိသော packets များကိုသိုလှောင်ထားသည့်ဌာနခွဲသည်၎င်းအခြေခံမူများ (လုံးဝ) မလိုက်နာသော်လည်းကန့်သတ်ချက်မရှိပဲဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကို Distro ၏သူတို့အားသိရန်၊ အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တရားဝင်စာမျက်နှာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်၊ သူတို့က၎င်းတို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်ပေးလိမ့်မည် Ubuntu ကို y Mint,
Canaima GNU / Linux ဗားရှင်း
ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးပုံတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် DEBIAN မှထုတ်ဝေသောဖြန့်ဝေမှုများအားနမူနာအဖြစ်နမူနာယူခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူကောက်နိုင်သည်။ DEBIAN Meta-ဖြန့်ချိမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းတို့မှဆင်းသက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသောကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများဖြန့်ချိမှုအကြားတိုက်ရိုက်လိုက်ဖက်ညီသောဆက်စပ်မှုရှိသည်Ubuntu၊ Mint, MX-Linux, Canaima နှင့် MinerOS ကဲ့သို့သော
Distros of all of Mother (DEBIAN) သည် Mother အသစ်များနှင့် Package အသစ်များနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များထုတ်ပေးသောကြောင့်ဤသဟဇာတဖြစ်မှုသည်တိုက်ဆိုင်နေသည်၎င်းတို့သည်အခြားသေးငယ်သူများသို့ Ubuntu ကဲ့သို့သောပိုမိုသေးငယ်သောအရာများသို့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့မှဆင်းသက်လာခြင်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း
Meta-distribution တစ်ခုသို့မဟုတ် Mother Distro နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများသို့မဟုတ်၎င်းတို့အပေါ်အခြေပြုသည့်အခါ၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကွဲပြားသောထပ်တူများစာရင်းရှိလိမ့်မည်။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငါတို့ကိုသူနဲ့မျှဝေဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
DEBIAN ကဲ့သို့သော Distros အချို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်း၏သီးသန့်နေရာများကိုလည်းထည့်နိုင်သည်, ဒီအတိတ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်အောက်ပါအတိုင်း DEBIAN တွင် PPA Repository ထည့်ရန်။
ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်ကြောင့်အသုံးဝင်သောခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ်သင်၏လူမှုကွန်ယက်အားလုံးတွင်ဝေမျှနိုင်ပြီးအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့် GNU / Linux အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » GNU / Linux ဖြန့်ဝေရေးသိုလှောင်ခန်းများ - သူတို့ပေါင်းစည်းခြင်း၏အနုပညာ!
အလွန်ကောင်းသောအလုပ်။ + 1 + 1 + 1 + 1
ကားလို့စ် Orellana Soto ဟုသူကပြောသည်
Excellent ကခန့်မှန်းအလှူငွေ! အကြိုက်ဆုံးကိုသွားမယ်
Carlos Orellana Soto အားပြန်ပြောပါ
သင့်အတွက်အသုံး ၀ င်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်လာခြင်းက ၀ မ်းသာပါတယ်။
Debian ဗားရှင်းများ၏ဘဝသံသရာတွင်ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာတစ်ခုမှာမူကွဲတစ်ခုအဟောင်းဖြစ်လာပြီးမူရင်းကိုညွှန်ပြသော်လည်း source.list ဖိုင်ရှိ url ကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်တွေမြင်ကြပြီ file ကိုပြုပြင်မွမ်းမံသည်အထိငါမွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
သင် Whezzy မှ Jessie သို့အဆင့်မြှင့်လိုပါက source.list ဖိုင်ရှိအမည်ရည်ညွှန်းကိုအမှန်ပြောင်းလဲရမည်။ Ubuntu ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲဗားရှင်းအသစ်များကိုရှာဖွေ။ အလိုအလျောက်ပြောင်းရွှေ့သော application ကိုယူဆောင်လာသည်။